14 jir Taageere U Ahaa Atletico Madrid Oo Geeriyoday+ Sababta. – Goolhaye
May 23, 2021 Jun 13, 2021 SiganeComment(0)
Intii lagu jiray dabaal daga guushii Atletico Madrid ee horyaal-ka Spain waxaa bartamaha magaalada Madrid ka dhacdey dhacdo xanuun badan iyadoo 14 jir Atletico Madrid tageere u ahaa uu naftiisa ku waayey dabaal dega kooxdiisa.
Kumanaan taageerayaal Atletico Madrid ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimada Spain ka dib markii Atletico Madrid ay guul 2-1 ah ka gaartay Real Valladolid Sabtidii, iyagoo 2 dhibcood ku qaaday horyaalka Spain ee LaLiga Santander.
Wiilka yar ayaa saarnaa baabuur ay tagerayaasha Atletico Madrid saarnayeen isagoo oo fadhiya ayuuna daaqada kala baxay qeybta hore ee jirkiisa wuxuna madaxa ku dhufsadey irida goobta gawaarida la dhigto ee Plaza de Santa Ana.
Gaadhiga uu saarnaa wiilka dhintay waxaa sidoo kale la sarnaa dhowr dhalin yaro ah iyagoo sidiisa camal qeybta hore ee jirkooda kala baxay daaqada baaburka, darawalka baburka ayaa meelo badan kusoo jiiday baaburka ka hor inta aan lasoo gaarin mesha uu dhibku ka dhacay.
Gawaarida gurmadka deg dega ah ee Ambalaasta ayaa soo gaarey goobta uu shilku ka dhacay balse waxaa ay xajiyen inuu geeriyooday wiilka yar marhore.
Sami Khedira Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fariisanayo Ciyaaraha.